किन्नर सेक्स पुतली - पुरुष र Tranny सेक्स गुडिया को लागी आधिकारिक बिक्री एजेन्ट
यथार्थवादी किन्नर सेक्स पुतली अनलाइन मा किन्नुहोस्
यो किन्नर सेक्स पुतली हामी बेच्ने विकसित र प्रसिद्ध निर्माताहरु द्वारा डिजाइन गरिएको हो। तिनीहरूसँग वास्तविक र आकर्षक ठूला स्तनहरू, नरम र नाजुक छाला, यथार्थवादी योनि, गुदा र छुट्याउन सकिने लिंग छ। यो सुन्दर प्रेम किन्नर यौन पुतलीले महिला र पुरुषहरूको कार्यहरू संयोजन गर्दै, वास्तविक व्यक्तिको भूमिकालाई पार गरेको छ। यी ट्रान्सजेन्डर पुतलीहरू उच्च-गुणस्तरको TPE र सिलिकन सामग्रीबाट बनेका हुन्छन्, मानवजस्तै विशेषताहरू भएकाले, तिनलाई मानवजस्तै देखिने र तपाईंलाई चरम उत्तेजितता प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। किन्नर यौन पुतलीहरू सबै आकार र आकारहरूमा आउँछन्। त्यसोभए, यदि तपाइँ ट्रान्स महिलाहरू मनपर्छ भने, तपाइँ एक उपचारको लागि हुनुहुन्छ। तपाईंले पूर्ण आकारको किन्नर पुतलीहरू र दुवै लिंग र सुस्वादित स्तनहरू भएको जीवन्त टर्ससहरू फेला पार्नुहुनेछ। थप के छ, तपाईलाई थाहा छैन कि किन्नर सेक्स डल कस्तो देखिन्छ, तपाईले जाँच गर्न सक्नुहुन्छ किन्नर यौन पुतली अश्लील एक यथार्थवादी किन्नर सेक्स पुतली कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्नको लागि, केहि मोडेलहरूले बिचमा पनि फिचर गर्दछ र डिक्सहरू बीच स्वैप गर्न विकल्प दिन्छ ताकि तपाईं एउटै जीवन जस्तो सेक्स डलसँग दुबै संसारको उत्कृष्ट आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।किन्नर प्रेम पुतली उत्कृष्ट यौन खेलौनाहरू हुन् जसले तपाईंलाई तपाईंको यौन जीवनका नयाँ पक्षहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्न सक्छ। यी खेलौनाहरू सबैका लागि केही न केही लिएर आउँछन् - आफैलाई छेड्नको लागि ठूलो कक डिल्डो, स्ट्रोक गर्नको लागि ठूलो स्तन र तपाईंले पियर्स र पियर्स गर्दा हेर्नको लागि, पियर्स गर्नको लागि गुदा सुरुङ, र केहि पनि पियर्स एट्याचमेन्टहरू सहित आउँछन्।
ओलिभिया - WM 166 सेमी मोहक गुड़िया ओछ्यानमा बस्दै तपाईंको मायाको लागि कुर्दै
अकिली -१156 सेमी छात्र आउटफिट ठूलो आँखाको साथ प्यारा र प्यारा प्रेम गुडिया डेस्क बिरुद्द झुकाव
18CM किन्नर लिंग पुरुष सेक्स गुड़िया dildo सिलिकॉन सेक्स टोय
किन्नर सेक्स गुडियाले तपाईंको यौन जीवनलाई मसला दिन्छ
किन्नर सेक्स पुतलीको बारेमा सबैभन्दा अचम्मको कुरा यो हो कि तिनीहरू पुरुष र महिलाका भागहरूसँग आउँछन्। तिनीहरू धेरै बहुमुखी छन् र एकल खेलाडी र जोडी खेलहरूको लागि उत्कृष्ट छन्। तिनीहरूलाई ट्रान्सजेन्डर पुतली पनि भनिन्छ। यदि तपाइँ कहिल्यै थाइल्याण्ड जानुभएको छ र लेडीबॉयहरूसँग समय बिताउनुभएको छ भने, तपाइँलाई थाहा छ कि ट्रान्ससेक्सुअल अनुभव कत्तिको अद्भुत हुन सक्छ। जे होस्, तपाईले थाइल्याण्ड वा अन्य एसियाली देशहरूमा ट्रान्स व्यक्तिहरूसँग खुला रूपमा संलग्न हुनको लागि यात्रा गर्नुपर्दैन किनभने तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मनपर्दो पुतली र आफ्नो यौन जीवन मसलादार।
बजारमा, तपाईंले पूर्ण आकारको ट्रान्सजेन्डर यौन पुतलीहरू, साथै केवल शरीर र कुनै अंगहरू नभएका पुतलीहरू भेट्टाउनुहुनेछ। यदि तपाईं स्प्लर्ज गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाईंले राम्रोसँग डिजाइन गरिएको अनुहार, कपाल, स्तन, डिक्स र बटहरू सहित किन्नर पुतलीहरू फेला पार्नुहुनेछ। तिनीहरूमध्ये केहीले शिराहरू सहितको पेनिसहरू पनि देखाउँछन् त्यसैले यो सम्भव भएसम्म वास्तविक चीजको नजिक देखिन्छ। किन्नर खेलौनाहरू पुरुष र महिला दुवैको लागि उत्कृष्ट छन्।
जब यो किन्नर सेक्स पुतली को लागी आउँछ, तपाईसँग धेरै विकल्पहरू छन्। कसैसँग फेम्बोय वा ट्रान्सजेन्डर काल्पनिक हुन्छ, जबकि अरूलाई यथार्थपरक ट्रान्सजेन्डर पुतलीतर्फ आकर्षित गरिन्छ। यद्यपि अन्तिम छनोट तपाईंको आवश्यकताहरूमा निर्भर गर्दछ, ट्रान्सजेन्डर पुतलीहरूलाई तिनीहरू बनाइएका र प्रदान गरिएका सामग्रीहरूको आधारमा निम्न प्रकारहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ।यथार्थवादी किन्नर सेक्स गुडिया - नामले सुझाव दिन्छ, यी पुतलीहरू सबैभन्दा जीवन्त छन्। तिनीहरूसँग यथार्थवादी स्तन र लिंगहरू छन्। तपाईंले तिनीहरूको अनुहार, कपाल र शरीरमा धेरै विवरणहरू देख्न सक्नुहुन्छ। एक यथार्थवादी किन्नर यौन पुतली एक विशेष प्रकारको हो। जापानी सेक्स गुड़िया। यी एनिमे क्यारेक्टरहरूमा आधारित छन् र हेन्टाई वा जापानी एनिमे कार्टुनहरू मन पराउनेहरूलाई अपील गर्दछ। यी पुतलीहरू डिक्सको साथ आउँछन् तर स्त्रीलिंगी शरीरहरू छन्। तिनीहरूको कपालमा एनिमे क्यारेक्टरहरू जस्तै धेरै रङहरू हुन सक्छन्।
किन्नर पुतली यथार्थवादी अगाडिको शरीर
सिलिकन किन्नर पुतली - सिलिकन किन्नर सेक्स डल धेरै टिकाऊ, नरम र लचिलो छ। तिनीहरू कम रखरखाव र सफा गर्न सजिलो छन्। TPE ट्रान्सजेन्डर सेक्स डलहरू - TPE वा थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमरले बनेको किन्नर पुतलीहरूलाई सिलिकनले बनेको ट्रान्सजेन्डर सेक्स डलहरू भन्दा बढी हेरचाह चाहिन्छ, तर तिनीहरू बढी प्रामाणिक महसुस गर्छन्। तिनीहरू हल्लाउन र सार्न सकिने शरीरका अंगहरू पनि आउँछन्। किन्नर पुतलीहरू सबैभन्दा किफायती हुन सक्छन्, तर तिनीहरू टिकाउ वा यथार्थवादी छैनन्। Shemale Doll Torso - यदि तपाईं पूर्ण साइज किन्नर पुतली खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं Shemale Doll Torso जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। यी पुतलीहरू स्तन र गुप्तांगहरू भएका शरीर मात्र हुन्, तर तिनीहरूका हातहरू छैनन्। यद्यपि, तपाईंले किन्नर पुतलीको धड़ माथितिर फर्केको फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
किन्नर पुतली को मुख्य विशेषताहरु
किन्नर पुतली को मुख्य विशेषताहरु के हो? किन्नर पुतली नरम, शरीर-सुरक्षित रबरबाट बनेको छ जुन स्पर्शमा सहज छ र जीवनको अनुभूति प्रदान गर्दछ। कपाल सामान्यतया सिंथेटिक सामग्री बनाइन्छ, तर तिनीहरू धेरै यथार्थवादी देखिन्छन्। अनुहार भएका पुतलीहरूले सामान्यतया श्रृंगार लगाउँछन् ताकि तिनीहरू वास्तविक ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरू जस्तै देखिन। ट्रान्सजेन्डर सेक्स डलहरू छालाको रंगमा भिन्न हुन सक्छन्, र तपाईंले गाढा छाला टोन, सेतो छाला, वा ट्यान्ड गरिएको छाला भएका किन्नर पुतलीहरू भेट्टाउनुहुनेछ। तिनीहरूसँग एशियाई सुविधाहरू पनि हुन सक्छ। किन्नर यौन पुतलीहरू डिल्डोसँग आउँछन् जुन वास्तविक लिंग जस्तो देखिन्छ र बल, टाउको र नसहरू समेत डिजाइन गरिएको हुन्छ। लिंगको लम्बाइ फरक हुन सक्छ, तर शाफ्ट सामान्यतया7देखि9इन्चको हुन्छ। यथार्थवादी स्तन किन्नर पुतली को एक महत्वपूर्ण विशेषता हो। बस्ट सी कप साइज, लोचदार र नरम छ। तिनीहरू प्राकृतिक स्तन जस्तै महसुस गर्छन्। केही किन्नर पुतलीहरू पनि संलग्नकहरूसँग आउँछन् ताकि तपाईं आफ्नो लिंगलाई बिल्लीको लागि बदल्न सक्नुहुन्छ।
कसरी सिलिकॉन किन्नर सेक्स पुतली सही प्रयोग गर्ने?
सिलिकॉन किन्नर सेक्स पुतली। ट्रान्सजेन्डर सेक्स डलहरू धेरै बहुमुखी, रमाईलो र अद्भुत छन्। तपाईं तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईं एक्लै हुनुहुन्छ र कसैको नजिक हुन चाहनुहुन्छ। वैकल्पिक रूपमा, यी पुतलीहरू तपाइँको यौन मुठभेडलाई अर्को स्तरमा लैजान सहकारी खेलमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईं किन्नर पुतली कसरी प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ तपाईंको व्यक्तिगत छनौट हो। यद्यपि, यहाँ केहि सुझावहरू छन् जुन तपाईंले आफ्नो यौन अनुभवलाई समृद्ध बनाउन विचार गर्न सक्नुहुन्छ। प्राय: किन्नर पुतलीहरू रबर वा सिलिकनबाट बनेका हुन्छन्, र तपाईंलाई ल्युब चाहिन्छ। सही समाधान भनेको पानीमा आधारित ल्युब प्रयोग गर्नु हो किनभने यो न टाँसिने र सजिलै धुन्छ। साथै, तिनीहरू दाग गर्दैनन्। के तपाइँ एकल खेलाडीको लागि किन्नर पुतली प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने, यसलाई बलियो रूपमा राख्नुहोस् ताकि तपाईंले आफैलाई छेड्दा वा आफ्नो लिंग त्यसमा घुसाउँदा यो डगमगाउन नपरोस्। यदि पुतली सुरक्षित रूपमा बाँधिएको छैन भने, तपाईं आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सक्षम हुनुहुने छैन।
जोडीहरू खेल्दा वा एकै समयमा धेरै साझेदारहरूसँग यौनसम्पर्क गर्दा ट्रान्सजेन्डर सेक्स डलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो भूमिका खेल्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि तपाईंलाई पुतलीसँग सेक्स गर्दा अनौठो लाग्छ भने, तपाईंले केही अश्लील हेर्न सक्नुहुन्छ वा फोनमा आफ्नो लामो दूरीको साथीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। किन्नर सेक्स डलहरू तपाईले चाहानु भए जति प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईलाई चाहिने सबै थोरै कल्पना हो। त्यसोभए, आफ्नो लागि एउटा पाउनुहोस् र रमाइलो सुरु गरौं।